Cudurka Zika oo lagu Arkay Gobolka Texas ee Maraykanka – Radio Daljir
Febraayo 3, 2016 6:50 b 0
Arbaco, Feberaayo 03, 2016 (Daljir) —Cudurka laga qaado Kaneecada ee ZIKA oo ah mid halis ah ayaa lagu arkay markii ugu horreysay bukaan loo maleynayo inuu ku qaaday qaab galmo ah oo ku nool gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Hay’adda caafimaadka ah ee gobolka Texas ayaa xaqiijisay in bukaan loo maleynayo inuu galmo la sameeyay ruux Cudurka Xambaarsan oo dalka Venezuela kasoo laabtay, sidaasna uu cudurkan ku qaaday.
Sidoo kale, hay’ada ayaan xusin magaca qofka cudurkan laga helay iyo qofka uu ka qaaday midna, waxayna sheegeen Mas’uuliyiinta Xaruntaasinaanu jirin walwal laga qabi karo inuu cudurku faafo oo ay ku dadaali doonaan inay xakameeyaan.
“Hadda waxaanu ogaannay in cudurkan lagu qaadi karo galmada iyo dhiigga uu cuduru ku jiro oo lagu shubo qof fiyow, sidaa awgeed tani waxay xoojinaysaa in shacbka laga wacyi-geliyo halista cudurkan uu u leeyahay Naftooda iyo Weliba in ay Caafimaadka Dadka kale inay ilaaliyaan,” ayuu yiri Zachary Thompson oo ah agaasimaha hay’adda baarista fulisay.
Cudurkan ayaa Faro-baas ku haya Waddamada ku yaalla Qaaradda America oo uu ka mid yahay dalka Venezuela oo Mareykanka ay daris yihiin, waxaana sidoo kale uu si xowli ah ugu faafayaa cudur dalal kale oo Qaaraddaas ku yaalla.